Suuq Cusub Oo Laga Hirgeliyey Dhanka Galbeed Ee Suuqa Bakaaraha – idalenews.com
Suuq Cusub Oo Laga Hirgeliyey Dhanka Galbeed Ee Suuqa Bakaaraha
Suuqaasi laga hir geliyey dhanka galbeed ee suuqa Bakaaraha ayaa ah suuq weyn oo ,loo bixiyey suuqa caalamiga ah ee al qaliifa waxaana suuqani uu leeyahay jidad waaweyn oo loogu tala galay iney kasoo galaan gawaarida sida badeecooyinka ee usocda suuqan iyo wadooyin sidoo kale laga dhex sameeyey gudaha suuqa al Qaliifa.
Dhisidda suuqan cusub ayaa waxaa dhismihiisa ka dambeeyey ganacsato iyo qubarro deristey ciriirigii ka jirey suuqa bakaaraha lagama maarmaanna u,arkay dhismaha suuqan al qaliifa.
Suuqan ayaa kakooban qeybaha ganacsiga oo u qeybsan dharka, udugga, ellectaronikada,kabaha,macmacaannada,iyo baarweyn oo loogu tala galay iney ka cunteeyaan ganacsatada suuqa iyo kuwa kale ee ka,imaanaya meelaha ka baxsan suuqa.
Suuqan cusub ayaa leh agabyadii lagula dagaalami lahaa hadii uu dab kakaco ,tubooyin waaweyn oo .iyana loo,adeegsan doono ka hortagga masiibo dab hadey timaado.
Furitaanka suuqa oo,ay kasoo qeybgaleen ganacsato,marti sharaf,iyo madaxda degmada Howlwadaag ayaa waxaa suuqa xarigga ka jaray gudoomiyaha, degmada Howlwadaag mudane Maxamed Abuukar Cali Jacfar ayaa sheegay in halka suuqan cusub laga furay ay aheyd meel aan muuqaal ahaan wanagsaneyn haatanna ganacsigu yahay mid xadeysan oo qeyb walbaahi leedahay meel ugooni ah.
Gudomiyaha suuqa al qaliifa mudane Cabdi C/laahi Xirsi ayaa sharaxay ujeedada loo,aas aasay suuqan cusub waxaana uu gudoomiyaha tilmaamay in suuqan baahi aad u weyn loo qabay hadana uu rajeynayo in suuqu daboolo baahidii ay dadweynaha iyo ganacsataduba u qabeen.
Qaar ka mid ah dadweynaha suuqaasi ka dukaameysanayey oo u badnaa Soomaalida kasoo laabaneysay mudooyinkan qurbaha oo saxaafadda la hadlay ayaa waxey wax lagu farxo ku tilmaameen suuqan cusub ee laga hirgeliyey duleedka suuqa Bakaaraha ayagoo hirgelinta suuqanna ku tilmaamay iney qeyb ka tahay hormarka uu dalka ku talaabsanayo.
Waa suuqii ugu horeeyey ee sanadkan bilowga ah laga dhiso magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga suuqa Bakaaraha lehna adeegyadii muhiimka u,ahaa suuqyada caalamka qaarkood iyo jidad dhexdiisa isaga kala goosha wuxuuna suuqani meesha kasaari doonaa walaacii ganacsatada kaheystey waqtiyada ay jiraan roobabka iyo xilliyada ay timaado cabsida laga qabi karo masiibooyinka dabka.
Axmed Madoobe oo sheegay in shirweyne maamul loogu samaynaayo Gobolka Jubadda hoose dhawaan furmayo
Dabley hubeysan oo ku weerartay dad saarnaa baabuur magaalada Garissa